Kuchema Nekugomera, Kuisa Chiratidzo, Kuputsa—Zvichaitika Riini Uye Zvichaitika Sei?
BHOKISI REKUDZIDZISA 16B
Chiratidzo chakanyorwa muchitsauko 9 chaEzekieri chichazadziswawo mazuva ano. Kunzwisisa kuti zvinhu zvichaitika sei kunogona kutibatsira kuti tive nechivimbo patiri kutarisana nekuguma kwenyika ino
ZVICHAITIKA RIINI: Mumazuva ekupedzisira, kutambudzika kukuru kusati kwatanga
ZVICHAITIKA SEI: Vanhu vane mwoyo yakarurama vanoratidza nemashoko nezviito kuti vanovenga uipi hwenyika ino. Vanhu vakadaro vanoteerera mashoko ari kuparidzwa, vanoramba vachipfeka unhu hwakaita sehwaKristu, vanobhabhatidzwa vachiratidza kuzvitsaurira kwavo kuna Jehovha, uye vanoramba vakavimbika vachitsigira hama dzaKristu
ZVICHAITIKA RIINI: Pakutambudzika kukuru
ZVICHAITIKA SEI: Murume ane nyanga yeingi yemunyori anomiririra Jesu Kristu paachauya seMutongi wemarudzi ese. Veboka guru vachaiswa chiratidzo chinoita kuti vanzi makwai, vopona paAmagedhoni
ZVICHAITIKA RIINI: PaAmagedhoni
ZVICHAITIKA SEI: Jesu Kristu neuto rake rekudenga, iro richasanganisira ngirozi nevaachatonga navo 144 000, vachaparadza zvachose nyika ino yakaipa vonunura vanamati vakachena kuti vapinde munyika itsva yakarurama
Chitsauko 16, ndima 17-19
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kuchema Nekugomera, Kuisa Chiratidzo, Kuputsa—Zvichaitika Riini Uye Zvichaitika Sei?
rr pp. 178-179